Kugara pamba kunoponesa hupenyu: Cayman Islands inoenda pane yakasarudzika kukiya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Kugara pamba kunoponesa hupenyu: Cayman Islands inoenda pane yakasarudzika kukiya
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Cayman Islands Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Zvitsuwa zveCayman zvichave pasi pekuvharirwa zvishoma kubva na7: 00 manheru manheru. "Kugara pamba kunoponesa hupenyu" ishoko reHurumende.
Kuridza tsamba yekunyevera kukuru neChipiri, 24 Kurume 2020, Cayman Islands'Vatungamiriri, vachitungamirwa naHuremekedzo Gavhuna, VaMartyn Roper naiye Mutungamiriri, Hon. Alden McLaughlin, akati nyika iyi yave pasi pekukiyiwa kwakakosha, zvichitevera nyaya ingangoitika yekupararira kwenzvimbo Covid-19 hutachiona hwataurwa mangwanani ano.
Dr. John Lee akati:
• 14 mamwe ma kesi akaedzwa asina.
Mhedzisiro inotarisirwa kubva murabhoritari yeCARPHA nhasi.
• Yakazara kesi yakasimbiswa yava nhanhatu, kusanganisira 6 kufa
• Iyo nyowani yekuyedza kesi kubva kumurwere kuHSA
Chiremba Mushandi Wehutano Dr. Samuel Williams-Rodriguez uye HSA CEO Lizzette Yearwood vakati:
Uyezve, vasere vemhuri yemurwere uye vashandi gumi nevasere veHSA vanogona kunge vakaonana nemunhu akaonekwa aine hutachiona kuHSA uye vari vega kumba. Murwere achiri parizvino asiri-chiratidzo cheCOVID-14.
• Munhu haana nhoroondo yekufamba.
Mutungamiriri wehurumende akazivisa kuti Hurumende yakaremerwa nezvikumbiro zvekuregererwa mu "Shelter in Place" uye zvaisazobatsira kuti Hurumende ienderere mberi kana mirairo yese ikapihwa yekuti takagamuchira zvikumbiro. Wese munhu ari kunetsekana nezvemhedzisiro yehupfumi hwehurongwa hwatiri kuda kuita - Hurumende zvakare, asi mhedzisiro yehupfumi haigone, ndinodzokorora haigone kuve yakakosha kupfuura hupenyu.
Nguva yekudzoka ichaenderera manheru ano:
• Nguva yekugadzwa iri panzvimbo kubva na7 dzemanheru kusvika na5 mangwanani zuva nezuva kwemazuva gumi anotevera. RCIPS inoongorora migwagwa yevanotyora nguva yekusvika pamba avo vachasungwa.
• Kubva mangwana (Chitatu, 25 Kurume) Hurumende ichasimbisa mabhizinesi ese asingakoshe achavharwa uye vese vasina basa vanofanirwa kugara pamba.
Aya makambani anotevera masangano ane vashandi vangangodiwa kuti vashande panguva yekumira uye vanozoregererwa. Vanofanira kunge vane Kambani ID uye tsamba kubva kuKambani inosimbisa kudiwa kwekuti vashande panguva dzemaawa ekubuda.
• Zvese zvekukurumidzira uye zvakakosha mabasa anosanganisira Mapurisa neSecurity Services, 911, Fire Service, Prison Service, Tsika uye Border Kudzora, Dhipatimendi reEnvironmental Health uye Island Waste Carriers.
• Emergency medical kusanganisira HSA, Health City, Doctors Hospital, Ambulance Services uye ese maDhokotera Mahofisi.
• Zvitoro zvikuru, zvinoti Fosters, Hurley's, Kirk's, Kirk Market muCayman Brac, Billy's Supermarket, Tibmart Co. Ltd, Mutengo U Pasina, Mutengo Wechigaro, Vatengesi Vanofambira Mberi, Cayisle Enterprises Ltd, Cayman Distributors Group, Jacques Scott Group, Blackbeard's, Sekuru Clems Vatengesi, Heston Ltd, Maedac Supply Ltd, MacRuss Superstore, Chisholms Supermarket
• Mabhangi ese ekutengesa
Zvishandiso nezvivakwa zvinoti Port Authority, Water Authority, Cayman Water Company, CUC, Sol Petroleum Cayman Ltd, Rubis Cayman Islands Ltd, Homegas Ltd, Ofreg, Cayman Brac Power uye Light, Gasi Rakachena, Refuel Ltd, Kuyerera, Digicel, Logic uye C3
• Hurumende iri kukurudzira ruzhinji rwevashandi munzvimbo yebasa yaCayman kuti vagare pamba.
• Vashandi veHurumende vakavhara zvikamu zvikuru zvemashandiro avo uye avo vanobvumidzwa kushanda pamba kuti vatevedze zviitwa neHurumende.
• Hakuchina humbowo hupi zvahwo hwomumwe kana vaviri vemafemu emutemo vashandi vane kondirakiti yeCOBV-19; Idzo inhau dzenhema.
• Nhare yekufambisa yekukurumidzira kune avo vanoda kufamba nekuda kwezvikonzero zvechimbichimbi kana zvetsitsi ndeye 244-3333.
• Mazuva gumi ekudzoka kumba anodiwa zvakanyanya kupfupisa mukana wekuremara nekupararira kweCOVID-19 munharaunda.
Commissioner wePurisa Derek Byrne akati:
Nekuraira kwakatambirwa kubva kuna Gavhuna kwenguva yekudzoka kumba, Mapurisa anozoisimbisa pahusiku gumi hunotevera.
• Mapurisa anoshandisa njere uye anoshandisa rusarura asi panenge pachishandiswa zvakadzama mutemo wekutongwa.
Vanhu vanomiswa vachatorwa mazita avo nekero nechinangwa chekutongwa kwematare kuti kuenderere mberi.
• Kunyange hazvo Mapurisa achitora nzira yakajairika, nguva yekudzoka kumba haisi nzira yepachena yekuti vanhu vaende kunotora kubva kubasa munhu anoonekwa seakakosha.